Jubbaland oo shuruud ku xirtay Wadahadal ay la gasho Dowladda Federaalka. - Awdinle Online
Jubbaland oo shuruud ku xirtay Wadahadal ay la gasho Dowladda Federaalka.
November 15, 2019 (Awdinle Online) – Maamulka Gobaleedka Jubbaland ayaa shuruud ku xiray wadahadal ay la furaan dowladda Soomaaliya, si xal looga gaaro khilaafka taagan ee salka ku haya diidmada dowladda ee doorashadii August ka dhacday Kismaayo ee uu ku soo baxay Axmed Maxamed Islaam Madoobe.
Madaxweyne Ku-xigeenka maamulka Jubbaland oo wariyayaasha kula hadlay madaxtooyada Jubbaland ayaa sheegay in loo baahan yahay sii deynta Wasiirka Amniga Cabdirashiid Xasan Cabdinuur (Janan), kaasoo ku jira xabsi ay maamusho Sirdoonka Soomaaliya.
Dowladda Federaalka ayuu sheegay iney dhibaatooyin hor leh ku wado Jubbaland, taasoo saameyn ku yeelan karta dadka Shacabka ah, iyadoo looga digay inuu Muqdisho ugu sii xirnaado Wasiir Cabdirashiid Janan oo ahaa Wasiirka Amniga Jubbaland.
Khilaafka labada dhinac ayaa cirka isu shareeray ka dib markii doorasho uu murun hareeyay mar labaad lagu soo doortay Madaxweynaha Maamulka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) iyo Dowladda Federaalka oo xabsiga dhigtay Wasiirkii Amniga Jubbaland, Cabdirashiid Xasan Cabdinuur (Janan) isagoo safar ah.
Previous articleDhageyso :-Wasiir Cawad oo u jawaabay Monica Juma Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya
Next articleKulan Qarsoodi ah oo Dhexmarey Sheekh Shariif iyo Fahad Yaasiin